Imali ekhokhelwa ukusingathwa nokunakekelwa kwangaphambi kokuprintwa kwe-OSF - i-AfricArXiv iyaqhubeka nemisebenzi yayo - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-14th February ngo-2020 I-14th February ngo-2020
'Amaseva adumile wokuphrinta abhekene nokuvalwa ngenxa yezinkinga zemali'
Izindaba Zemvelo, 1 Feb 2020, doi: 10.1038/d41586-020-00363-3
Lesi yisihloko se udaba lwayizolo lweNdaba Yezindaba ebhekane nezimali zensiza ye-OSF.
Siyaqhubeka nezinsizakalo zethu kulo lonke unyaka ka-2020 futhi sisebenza ngecebo lokuqapha umgwaqo kanye nezimali ukuqhubekisela phambili imisebenzi ezayo futhi sishumeke i-AfricaArXiv endaweni ekhulayo ye-Open Science ezwenikazi lase-Afrika.
Simise a ikhasi lomnikelo lapha kuwebhusayithi yethu kanye nomkhankaso wokubuyisa imali eningi epulatini ye-opencollective.com.
ehlanganisa imali yokubamba neyokugcina ye-OSF
ukuhlela, ukwenziwa lula, kanye nemibhalo yesikhulumi nezinsizakalo ze-KiaArXiv
Ukuxhaswa kokuvakasha ukwethula i-AfricArXiv engqungqutheleni
Imininingwane embalwa ngemininingwane yethu 'yama-Afrika'
NgoJuni 2018, thina wethule i -AfricaArXiv ngokubambisana ne-Center for Open Science futhi selokhu ngamukele imibhalo yesandla yokuqala eyi-100 kanye namaphosta, imibiko yabafundi, kanye nezokuxhumana ezimfushane.
Ngo-2020, i-Center for Open Science isicele ukuthi siphakamise i-USD 999.- yokusingathwa nokulungiswa kwengqalasizinda ye-OSF futhi besekelwa ekuboneni izindlela nezinqumo zokubhala ngokubambisana nazo, isib. isibonelelo seNSF futhi ucingo oluvela kuChan Zuckerberg Initiative.
Ukumenyezelwa kwemali kusishukumisele ukuba sibheke ukuqhathanisa izinsiza nezindleko zokuzazisa ngalokho okutholakalayo. Kungekudala kwacaca ukuthi sifuna ukuhlinzeka ngezinketho ezingaphezu kweyodwa emphakathini wethu ukufaka imali yabo. Siyathokoza nge-COS ngokusungula i-AfricArXiv ndawonye nathi futhi yasenza safika manje. Manje sekuyisikhathi sokuthi sikhule futhi sandise ukubambisana ezinhlakeni ezahlukahlukene ze-Open Science ne-Open Access ukuze kuzenze zibe nokwenzeka futhi zivumelane nezimo kubacwaningi ezwenikazi lase-Afrika. Sifuna ukuqhubeka nalolo hambo sihlangana ne-COS futhi ingqalasizinda ye-OSF, ohlinzeka ngezinsizakalo eziningi eziningi ngaphandle kokufaka umlando wokugcina umlando kuphela; ososayensi bangakwazi futhi ukuqhuba umjikelezo wabo wephrojekthi ku-OSF kufaka phakathi imininingwane yedatha, ukubhaliswa, nokuguqulwa.
Njengamanje siphethe imisebenzi ecishe ibe yi-100 eyamukelekayo, iningi imibhalo yesandla, izethulo ezimbalwa, nephosta.
Ilungelo eliyiphumelele kakhulu maqondana nokutholakala https://osf.io/preprints/africarxiv/y3bp7/ ngokulanda okungaphezulu kwe-1k
Noma ukuthathwa kuthatha kancane, okulungiselela kuqala ukwanda njengesinyathelo esengeziwe sokushicilelwa kwamaphephabhuku. Sisebenzisana nabalingani bethu ukugqamisa kubacwaningi base-Afrika, ikakhulukazi, izinzuzo ezilethwa yizincazelo zokuxhumana kwezomnotho emhlabeni jikelele.
Izinsizakalo zibiza imali, iqiniso lelo. Siyakuqonda ukubaluleka futhi kuyinselele kuwo wonke umuntu othintekayo kepha futhi kuyisifundo esihle sokuhlela ingqalasizinda esebenza futhi eqhubekayo kusukela ekuqaleni. Njengoba isimo sezemfundo sizakha kabusha, bonke ababambe iqhaza kudingeka benze izibalo futhi babone ukuthi kungcono kanjani ukusabalalisa isabelozimali nokuthi ubani okhokhela ini. Ngaphandle kwezindleko eziqondile zengqalasizinda, kunezinye izindleko eziqondile ezibandakanyekile ekusingatheni kokulungiswa kokuqala nokunakekelwa, isb ngezinsizakalo ezihlanganisiwe epulatifomu ezinikezwe abantu besithathu, iHR, ukumaketha njll.
Abahlinzeki, izinselelo namathuba
Kusukela kwethulwa, sitshale izimali zethu (isikhathi nemali) ukwakha ipulatifomu, kufaka phakathi iwebhusayithi yethu kanye nokufinyelela kubantu ababhekiswe kubo. Sicabanga ukuthi abacwaningi akumele kube yibo abakhokhela izinsizakalo zethu kunalokho, sifinyelela emitatsheni yolwazi yezikhungo, kohulumeni, ezisekelweni, nakubanikeli - base-Afrika nabamazwe omhlaba. Ngokuthola imali ngobuningi, simise ikhasi lomnikelo ku- https://info.africarxiv.org/contribute/ futhi bathuthukisa isu lokuxhaswa kwezimali kanye nokuhlelwa kwemigwaqo ngo-2020 neminyaka ezayo.
Ngenxa yesimo esiyinkimbinkimbi kulelizwekazi, sibheke okokuqala ekufundeni ngalabo ababambe iqhaza futhi saba nezingxoxo nabachwepheshe abahlukahlukene. Sifuna ukusebenzisana nababambiqhaza base-Afrika ngokuyinhloko futhi sihambisane neminikelo yezimali emhlabeni jikelele. NgoMashi 2020, sihlose ukwethula umkhankaso wethu wokubuyisa isixuku futhi silindele ukuthathwa ngokuqinile kweminikelo ukuze sikwazi ukubhekana nezindleko zethu eziqhubekayo kubandakanya imali ye-OSF yango-2020.
Izimali zikhawulelwe ikakhulukazi e-Afrika futhi emhlabeni jikelele zibophezelwe ezinhlakeni eziphelelwe yisikhathi. Njengoba ukuxhumana kwezazi kudlulela ekwenzeni izinto obala ngokwengeziwe kanye nemikhuba yeSayensi Evulekile ezingeni lomhlaba wonke sihlose ukuba kube nezwi eliqinile futhi elihlangene elivela e-Afrika ukuze liqondise kabusha izinhlaka zezimali - isib nge-IOI - https://investinopen.org/.
Izinselele zokukhokhela izindleko
Ukumaketha kungumsebenzi omningi futhi kufaka imali eningi yokuhamba futhi kutholakala amahora amaningi ukutshala imali ukuze kuqinisekiswe ukuthi ababambiqhaza boCwaningo bafunda ngezinzuzo zokukhokhela izinzuzo ezinikezwa umphakathi wokucwaninga. Akunjalo kuphela e-Afrika, Latin America nase-Asia kodwa emhlabeni jikelele. Ezinye izinselelo esifundeni zifaka ubunzima bezimali, amaholo aphansi wabasebenzi be-HE kanye nokushoda kwengqalasizinda. Iningi lomphakathi lihola umsebenzi ngokuzithandela emifanekisweni yokuqala futhi linemithombo elinganiselwe yokwenza umsebenzi odingekayo wokuqongelela imali, okuyinto uqobo nakwezinye izindawo kuwumsebenzi wesikhathi esigcwele wamaqembu amakhulu.
Isu lethu lokusimamisa kuze kube manje
Ngokwengeziwe ekubambisaneni kwethu okuqhubekayo neSikhungo Sokuvula Isayensi ukusebenzisa ingqalasizinda yabo ye-OSF, sihlukanise ipulatifomu yethu ngokusebenzisana kanye neZenodo neScienceOpen. Lokhu kuvumela abacwaningi base-Afrika ukuthi bakhethe umbhalo wokuqala wezinto abazithandayo nangokusho kwezidingo zabo:
Ngaleyo ndlela, sizoqhubeka nokusebenza ekuqinisekiseni ukuthi izinsizakalo zethu zokugcina zingatholakali zomphakathi wase-Afrika Wocwaningo.
Izinsizakalo ezithile nezingeziwe nezinzuzo ezinikezwe yipulatifomu ngayinye zibhalwe ku https://info.africarxiv.org/submit/.
E-Zenodo, sisebenzisa i-akhawunti yomphakathi engenamahhala ukusetha futhi inakekele noma ngubani kunoma yisiphi isihloko.
NgeSayensiOpen sinesivumelwano sokuthi singasebenzisa ingqalasizinda yabo yangempela mahhala ngonyaka ka-2020 siphinde sizihlolisise ngasekupheleni konyaka. Ngaphezulu kwephothali yokungenisa, uhlelo lwangaphambi kokuqalwa kweSayensiOpen lube nokubuyekezwa kontanga okulinganiswe okuhlanganisiwe okungeza elinye izinga lenkonzo.
I-OSF ihlinzeka ngokugcinwa kwedatha kuwo wonke umjikelezo wokucwaninga wephrojekthi. Kusezingeni lososayensi ukukhetha ukuthi yiliphi ipulatifomu abalithandayo.
Ekucaleni kwemisebenti ye-AfricArXiv, umbono wetfu wesikhatsi lesidze bewulokuhlala njalo wenta ipulatifomu leyenganyelwe kulelivekati lase-Afrika, ngekwemtsetfo etikhungweni letehlukene tekucwaninga kuto tonkhe tindzawo, kute kucinisekiswe kubunikati bemiphumela yekucwaninga yase-Afrika kanye nekuniketa emandla labatsintsekako belucwaningo base-Afrika ekucaleni, ukusebenzisana, kanye nokushintshana kolwazi ezingeni lomhlaba jikelele.
Sifinyelela ezinye izindlela, izinhlangano, kanye nabalingani ukwenza lokhu kwenzeke maduze. Xhumana nathi ukuze ubambe iqhaza.
Simise a ikhasi lomnikelo kwiwebhusayithi yethu futhi asociated Vula Ngokubambisana umkhankaso wokubuyiselwa kwemali.
Emavikini ambalwa alandelayo, sesiqala amasu okufinyelela kubantu ukuxhumana nababambiqhaza bezemfundo ephakeme kanye nabacwaningi bama-Afrika ngobulungu kanye nezivumelwano zokubambisana.
Xhumana nathi ukuxoxa ngemibono nokusikisela: info@africarxiv.org.
Tags: Isikhungo se-Open ScienceUhlaka lweSayensi evulekileimali yenkonzo